မြန်မာ့သားကောင်း: (၁၁-၉-၁၂)ရက်နေ့က ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ သရက်အုပ်ကျေးရွာမှ ဦးကျော်မောင်ချေ (အသက်-၆၃)နှစ် ဆိုသူ ရခိုင်သားတစ်ဦး လည်ပင်းကိုလှီးဖြတ်၍ အသတ်ခံ (သွေးလန့်တတ်သူများ မကြည့်ရ)
ရွာသို့ပြန်မရောက်သဖြင့် အိမ်သားများက ညနေ(၉း၀၀)နာရီခန့် တွင်ကျောက်တော်မြို့သို့ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းရာ ဦးကျော်မောင်ချေမှာ
ညနေ(၅း၀၀)နာရီခန့်ကပင် ကျောက်တော်မှ သရက်အုပ်သို့ပြန်သွားကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။ အိမ်သားများမှာ စိုးရိမ်ပူပင်၍ ဆွေမျိုးရွာသား (၆)ယောက်က ဓာတ်မီးများနှင့် ရွာအပြင်သို့ထွက်၍ လိုက်ရှာခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျောက်တော်ဘက်သို့သွားရာလမ်းသို့ ထွက်၍လိုက်ရှာကြရာ ရွာမှ (၁)မိုင်ခန့်အကွာ လမ်းပေါ်တွင် သွေးများတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍လိုက်ရှာမည်ပြုကြသောအခါ လမ်းပေါ်မှ (၁)မိုင်ခန့်အကွာ ပိုက်သည်ကုလားရွာဘက်မှ ဓာတ်မီးအလက် (၂၀)ခန့်၏ မီးရောင်များကိုမြင့်တွေ့ရ၍
မသွားရဲဘဲ ရွာသို့ပြန်လာပြီး ရွာသား(၃၀)ခန့် သွားခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ရွာသားများရောက်လာသောအခါ ဓာတ်မီးများကို မတွေ့ရှိရတော့ပေ။ ထို့နောက် သွေးစက်များအတိုင်းလိုက်ရှာကြရာ ည(၁၁)နာရီခန့်တွင်
ပိုက်သည်ကုလားရွာဘက်ရှိ လယ်ကွက်သုံးကွက်ကျော်၌ လည်ပင်းနှင့် နောက်စေ့ကိုဓားဖြင့်အခုတ်ခံထားရသော ဦးကျော်မောင်ချေ၏အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ဦးကျော်မောင်ချေမှာ ဒေါ်ယိုင်နုစိန်ဟုခေါ်သော ဇနီးတစ်ယောက်နှင့် သားသမီး
(၇)ယောက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ သရက်အုပ်ကျေးရွာသည် ကျောက်တော်မြို့
အနောက်တောင်ဘက် (၄)မိုင်ခန့်အကွာရှိ ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ရွာသားများမှာ
နေ့စဉ်လိုလို ကျောက်တော်မြို့ပေါ်သို့ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ်သွားနေကြရရာ
လမ်းပေါ်မှ တစ်မိုင်ခန့်အကွာရှိ ပိုက်သည်ရွာမှ ကုလားများ၏ လာရောက်ရန်စ
မှုကို မကြာခဏခံကြရသည်ဟုဆိုသည်။ ယခင်က သရက်အုပ်ရွာမှ ကျောင်းသူ/သားများသည်
ကျောက်တော်မြို့ပေါ်သို့ နေ့စဉ် အသွားအပြန် ကျောင်းလာတက်ကြသော်လည်း
ယခုနှစ်တွင် မိဘများမှာ ကုလားရန်ကိုကြောက်၍ မိမိတို့၏ သားသမီးများအား
At 9/12/2012 11:36:00 AM
Anonymous December 20, 2012 at 2:13 PM
တို.လူမျိုးတွေ ကုလားတွေသက်လို. ကုန်တော.မယ်ထင်တယ်
ဆက်ဝေယံအောင် January 11, 2013 at 5:25 PM
မြန်မြန်မောင်းထုတ်စမ်းပါစောက်ကုလားတွေငါ့တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုများ ရခိုင်ငါတို့တိုင်းရင်းသား........ ရခိုင်ငါတို့တိုင်းရင်းသား........ ရခိုင်ငါတို့တိုင်းရင်းသား........ ရခိုင်ငါတို့တိုင်းရင်းသား........
မှန်တယ် ကွာ ဒီကောင်တွေ လွန်လွန်း လာပြီ သူတို. ဘာသာက ဘာလဲ လူသက်ဖို.လား
မြန်မာပြည်သူတစ်ဦး July 12, 2013 at 4:56 PM
ခွေးနဲ့မနှိုင်းပါနဲ့ ............ မတန်ပါဘူး
ခွေးတွေက ကိုယ့်ကို နေရာတစ်ခုပေး အစာကျွေးထားမယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့ခြံကိုတောင်စောင့်ပေးတတ်တယ် အန္တရာယ်ကိုတောင် ကာကွယ်ပေးတယ် အသက်ကိုတောင် ကယ်တင်တတ်တယ်ဆိုတာ ငါတို့ကြားဖူး မြင်ဖူးပါတယ်
ခံယူချက်ကို က လှေခွက်ကြီးကျန် အလံမလဲသည့် စိတ်ဓါတ် တဲ့ ဆိုးပါ့ မြန်မာတွေရာ...အလံကျန်တော့ ဖင်ခံရတော့မ ပေါ့...